Tezitra ny tantsaha mpamboly fa navotsotry ny fitsarana ny mpangalatra lavanila tratra am-bodiomby tany Vavatenina - Taratra du 2 avril 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgache Tezitra ny tantsaha mpamboly fa navotsotry ny fitsarana ny mpangalatra lavanila tratra...
Nihaona tamin’ny mpanao gazety ny tantsaha mpamboly lavanila, niharan’ny halatra. Nilaza i Franklin sy Razafindahy José, mponina any amin’ny fokontany Marovato, kaominina Ambohibe, distrikan’i Vavatenina, fa tsy izy ireo intsony no mioty ny lavanila tato anatin’ny taona maro fa ny mpangalatra, sady mihorohoro tanteraka, ankehitriny. Notsoriny fa misy ny mpitandro filaminana sasany sy ny sefo fokontany sasany any Vavatenina miara-mitsikomba na miaro ireo mpangalatra ireo ary eo koa ny ahiahin’izy ireo amin’ny fitsarana.
Notanisain’izy ireo ny tranga faramparany, toy ny 19 desambra 2018, ka very ny lavanila 20 fototra, miaraka amin’ny voany. Very ny 9 febroary 2019 teo koa ny 70 fototra, ary tratran’izy ireo teo am-pitangosana lavanila, ny 20 febroary, ny lehilahy iray antsoina hoe Pierrot.
Norahonana ny mpitory
Nentina tany amin’ny tobin’ny zandary izy, ny 21 febroary, ary niakatra fampanoavana teto Toamasina, ny 25 febroary. Raha ny fahitan’ireo tantsaha niharam-boina ireto, tsy nisy ny famotorana firy natao tamin’i Pierrot fa fananarana no nataon’ny mpitsara hoe: “aza mangalatra intsony ianao”.
Notsorin’ireto tantsaha ireto fa nandrahona azy ilay voarohirohy, nilaza fa tsy ho voagadran’ny mpitory ary tsy maintsy hanohy hangalatra izy satria tsy hiaraka amin’ny olona tsy manam-bola. Nivoaka ny 19 marsa ny didy ka nohafahan’ny fitsarana madiodio, noho ny fisalasalana, i Pierrot. Raha ny fitantaran’ireo mpitory, nilaza tamin’ity voarohirohy ity ny mpitsara fa tsy hoe tsy nangalatra izy fa tsy ampy ny porofo itazomana azy ka afahana noho ny fisalasalana aloha.
Heloka bevava ny halatra lavanila
Raha ny fijerin’ny mpitory, miaiky ny mpitsara fa nangalatra tokoa ity voampanga ity. Raha ny lafiny halatra anefa, sokajina ho heloka bevava ny halatra tratra am-bodiomby. Nohamafisina sy nantitranterin’ny Praiminisitra Ntsay Christian mihitsy izany, nandritra ny fivoriana niarahany tamin’ny Vaomiera iombonan’ny fitandroana ny filaminana (OMC), ny 25 marsa teo, fa tsy azo ekena mihitsy ny fanomezana fahafahana vonjimaika ny olona voarohirohy amin’ny halatra lavanila, ny fakana an-keriny, ny halatra miaraka amin’nyfitaovam-piadiana, sns. Tsiahivina fa anisan’ireo antony voatanisa ireo ny nampihantonana ireo mpitsara miisa dimy teto Toamasina farany teo.
Amin’izy ireo, tsy hamaha ny halatra lavanila ny tranga toy izao, ary ahina ny hiverenan’ny fitsaram-bahoaka, raha tsy mandray andraikitra haingana ny fanjakana.
Article précédentLes cinq magistrats suspendus de la chambre d’accusation de Toamasina contre attaque sur la forme de la suspension – Expressmada du 2 avril 2019
Article suivantRaharaha kidnapping sy mpiasan’ny fananan-tany – Mifanenjana ny ministra sy ireo mpitsara naato – Taratra du 3 avril 2019